China Heat Shrinkable Protective Cover Bus bar mpiray boaty mpanamboatra sy mpamatsy | Histe
Ny boaty fihaonana MPH busbar dia vita amin'ny fanamafisam-peo polyolefin mampifandray busbar shrinkage mafana izay ampiasain'ny die. Nampiasaina tamin'ny transformer, arrester, switch ivelany ary fitaovana elektrika hafa. Manana ireto toetra manaraka ireto izy:
1. Fisorohana ny fahasimban'ny bus amin'ny asidra, alkaly, sira ary zavatra simika hafa.
2. Esory ny lesoka fohy ataon'ny totozy, bibilava ary biby kely hafa.
3. Fisorohana ny ratra tsy nahy nateraky ny banga velona niditra tsy nahy nataon'ny mpiasan'ny fikojakojana.
4. Vahaolana ny olan'ny insulement eo anelanelan'ny slot bus mba hisorohana ny vovoka, fandotoana ary ny flashover fanondranana.
5. Miorina amin'ny herinaratra ny: 1kV, 10kV, 20kV, 35kV.
6. Loko mahazatra: mena, mavo, maitso, manga sy mainty dia mizara mivantana amin'ny dingana. Ny loko sy ny habe hafa dia azo amboarina.
Fampisehoana sy toetra mampiavaka azy
MPH andian-dahatsoratra dia insulated elektrika tsara, tantera-drano fiarovana fiarovana fiarovana vokatra. Izy io dia manana ny mampiavaka mora ny fametrahana, tsara ny tontolo iainana adaptability sy ela fanompoana fiainana. Izy io dia ampiasaina indrindra ho fiarovana insulated sy fiarovana fiarovana ny bus fifandraisana amin'ny herinaratra sy ny substations. lozam-pifamoivoizana fohy vokatry ny fandotoana ny biby vahiny nilelaka biby, manakana ny vatan'olombelona amin'ny fikororohana herinaratra, fandotoana ary flashover fanalefahana, mampihena ny fahasimban'ny fitaovana fitondra amin'ny rivotra sy entona manimba, ary manitatra ny androm-piainan'ny fitaovana elektrika.
1. Herin'ny krizy: & GT; 15 mpa
2. Ny tanjaky ny fanapotehana: & GT; 25 kv / MM
3. Coefficient fanoherana ny volume: & GT; Ω. 1014 cm
4. Temperatura amin'ny serivisy: 55 - + 105 ℃
5. Loko: mena, maintso, mavo ary mainty
Mena: ny mpampitohy dia "L" karazana: 100x10 fiara fitateram-bahoaka indroa napetaka tamin'ny fiara fitateram-bahoaka 100x10
Maitso: Ny mpampitohy dia "L" karazana: fiara fitateram-bolo tokana 120x10 nopetahana bisy tokana 100x10
Mavo: Ny mpampitohy dia karazana "T": bus 100x10 tokana mipetaka amin'ny fiara fitateram-bahoaka 80x10
Green: mpampitohy "X": bus iray tokana 100x10 nilanja bus 100x10
Manaraka: China Manufacturer Economic Type Type Voltage Switchgear Electric Electric Distribution Cabinet
(1) Antoka azo antoka
Manana fizotran'ny fifehezana kalitao faran'izay henjana izahay hatramin'ny vokatra vita. Lab fanandramana mandroso mba hahazoana antoka fa manatsara ny vokatra sy manatsara ny fahaizantsika mamorona. Ny kalitao sy ny fiarovana no fanahin'ny vokatra anay.
(2) Serivisy tena tsara
Ny traikefa an-taonany maro momba ny fanamboarana sy ny orinasam-panondranana manankarena dia manampy anay hametraka ekipa serivisy varotra voaofana tsara ho an'ny mpanjifa rehetra.
(3) Fanafahana haingana
Fahaizana manamboatra matanjaka hanomezana fahafaham-po ny fotoana mitarika maika. Manodidina ny 15-25 andro fiasana aorian'ny nahazoantsika ny vola. Miovaova arakaraka ny vokatra sy ny habetsany.
(4) OEM ODM sy MOQ
Ekipa R&D matanjaka ho an'ny fampandrosoana vokatra vaovao haingana, mandray an'i OEM, ODM izahay ary manafatra ny baikon'ny fangatahana. Na ny fisafidianana vokatra amin'izao fotoana izao avy amin'ny katalaoginay na mitady fanampiana injeniera ho an'ny fampiharana anao. Azonao atao ny milaza aminay momba ny fepetra takiana aminao.
Raha ny mahazatra ny MOQ dia 100pcs isaky ny modely. Izahay koa dia mamokatra OEM sy ODM arak'izay takinao. Mamolavola mpandraharaha manerantany izahay.